NTUGHARIA 6-GUITAR GUITAR FREE DOWNLOAD - MMEMME NYOCHA - 2019
Ntughari 6-guitar 1.0
Isi ihe dị mma iji guitar guitar, ma e wezụga ike iji aka ya na-eme ihe a, bụkwa nụgharị ya. Enyemaka a na-agba ọsọ n'ime usoro a nwere ike inye software dị iche iche iji dozie ma melite ntọala akụrụngwa. Ezigbo onye nnọchiteanya nke usoro a bụ usoro ihe omume "Ịtọ ụda nke 6".
Ịtọpụta ngwá egwú
Ọrụ nke usoro ihe omume ahụ na-agụnye nyocha nke ụda nke microphone na-enweta maka ọdịda na nke kwekọrọ na otu edetu. Nsonaazụ nke omume a software a na-enye n'ụdị nke ọnụ ọgụgụ na-egosi ngbanarị nke ugboro nke ụda olu natara site na edemede.
Ihe omume a dị nnọọ mfe iji;
Enweghị mmemme ahụ na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye mmepụta.
Mkpa ọ dị na-akpọ ụda mgbe niile nwere ike ịme gị iwe, mana ị gaghị eme ya n'emeghị ihe a. Enwere ike ịchọta enyemaka maka ịmegharị guitar site na usoro ihe omume ahụ "Ichegharị ụda 6", nke anyị tụlere na nyochaa mkpirikpi a.
Guitar tuning Software Jikọọ guitar na kọmputa Guitar camerton Mooseland Guitar Tuner
Ịgbanye ụda olu nke 6 bụ usoro dị mfe na nke nweere onwe ya bụ nke nwere ike inye aka dị ukwuu n'iji ntị guitar guitar site na iji igwe okwu eme ihe.
Onye Mmepụta: Guitar-song.ru